Maxaa looga hadlay kulankii Cali Guudlaawe iyo waftigii Qadar.
May 3, 2021 Xuseen 5
Waxaa dawlad-wanaagnimada iyo daahfurnaanta siyaasadeed muftaax u ah in si qaladaadka hoggaamineed ee la galay si joogto ah inta loo aqoonsado, toos looqirto, markiiba lasaxo, deetona mustaqbalka laga taxadaro.
Hoggaankeenna Puntland cambaarta saaran waa midda kasooraacday fiiragaabnidii ay Puntland kuseejiyeen saamigeedii ay deeqaha iyo gargaarka caalamiga kulahayd, iyaga oo weliba ay fursado dhowr ah ee ay libintaas ku solaan soomareen: Carta, Embagathi, Garowe I & II, iyo shirarkii Turkiga iyo Brussels. Intuba waxay ahaayeen fursado aad uqaalisan ee ay Puntland ku guuleysan lahayd inay beesha caalamka kuqanciso in inta ay dawladda qaran ee la yagleelayay iskudubbadhacayso saamigeeda goonideeda loogu guddoonsiiyo.
Waxaa madaxdeenna sixun useegtay garashada ah in aysan siyaasadda dalku xasilnayn oo iskuhalleynna lahayn, fariidnimo iyo fiiradheerina ay ku ahaan lahayd inay xukuumad Xamar fadhida aad ugataxadaraan inta ay dawlad qaran oo dhab ahi bilanayso.
Fashilka uguweyn waxaa uu madaxda Puntland kudhacay labadii goor ee kala ahaa (i) markii uu Farmaajo ra’iisal wasaaraha ahaa oo uu talameelkii “dual-track” loogu magacdaray ganafka kudhuftay isaga oo Puntland iyo Somaliland kucuryaaminayay, iyo (ii) shirarkii ee ay madaxda Somaliland xukuumaddii Xassan Sheekh iyo beesha caalamkaba saamigooda in gooni loogu guddoonsiiyo kaga dhalaalsadeen. Waxaan aad ulayaabaa dadka aynu reer Puntland islanahay ee iskudaya inay iintan madaxdeenna kadifaacaan halkii ay runta usheegi lahaayeen.
Waxaa kale oo aan aaminsanahay inay lagama maarmaan ahayd inay madaxdeenna Puntland muujiyaan firfircooni iyo fiiradheeri ay Turkiga iyo Qadar kusoojiidanayaan maadaama aysan diblumaasiyad ahaan labadan dal umuuqan karin kuwo intay dawladda qaran ka dul tallaabsadeen maamullada toos ulamacaamilaya. Madaxdeenna ayaa looga baahnaa inay si sireysan galaangalkaas usameeyaan oo ayna hiraal iyo hiigsii sooyaalka waddamadan kadhexeeya kusaleysan inta soodhisaan miiska usaaraan.
Waxaase beddelkeeda dhacday inay Imaaraatiyiintu madaxdeenna u gooddiyeen oo ayna Puntland uga dhigeen shirqool dhaqaale ee ay kaga afqabanayaan xiriirro iyo iskaashi dhaqaale ee ay dawlado kale – siiba Turkiga iyo Qadar – lawadaagto. Siyaasadda sideedaba khuslado ay fariidnimo, fiiradheeri, indheergaradnimo, geesinimo, iyo galaangal farsameysan kamid yihiin ayaa lagaga miradhaliyaa.
Garab Adhi waad ka badbadise waa sidee saxiib, Hargaysa imow anaga wasiir kaa dhigayne kkkkkkk
Puntland iga badan, mahadsanid.
Qofkaas Sare aniga maahan. Waar nil Ramadaane isku xishoo. Awlal hadaad rabto inaad wax ku tidhaahdo toos u abaar.